ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ အဖြစ်များတဲ့ အိပ်မပျော်တဲ့ပြဿနာ . . .
—–၊ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင့်လာတဲ့အခါ အိပ်မပျော်တာက ပိုဆိုးလာပါတယ်၊ အဲဒါကကော ဘာကြောင့်ပါလဲ ဆရာ။ အိပ်ပျော်အောင် ဘယ်လိုနည်းလမ်းလေးတွေ လိုက်နာလို့ ရပါသလဲဆရာ။ A. ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ လရင့်လာရင် အိပ်မပျော်ဘူးဆိုတာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေကို...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ ကြွက်မတက်စေဖို့ …
—–၊ ပါမောက္ခဦးနေဝင်း (အရိုးခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ ကြွက်မတက်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်ပါသလဲ။ A. ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ အနေနဲ့ကတော့ ကယ်လ်စီယမ်နဲ့ မဂ္ဂနီစီယမ် ဖြည့်စွက်စာတွေ လိုအပ်ပါမယ်။ ဆရာတို့နိုင်ငံမှာ ဒီဖြည့်စာတွေ ပိုပြီးတော့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါတွေစားပေးရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ကြွက်တက်တာကို...
ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းနှင့် ကလေးမွေးခြင်း ဆက်စပ်မှု ရှိ၊ မရှိ
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းဟာ အမျိုးသမီးတွေမှာ ကလေးမွေးခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိပါသလား။ မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်လို့ ရပါသလဲ။ A. အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ရိုးရိုးပဲမွေးမွေး၊ ဗိုက်ခွဲပြီးပဲမွေးမွေး ဆီးအိမ်ထဲမှာ ဆီးမကျန်အောင် ဆီးချူရပါတယ်။ အဲဒီအတွက်...
—–၊ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊—– Q. ၂၀၁၈ မေလမှာ လက်မောင်းထဲကို ထည့်ရတဲ့ဆေး ထည့်ခဲ့ပါတယ်ရှင့်။ ရာသီစက်ဝန်း ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါသလဲလို့ အိုဂျီဆရာမကြီးကို မေးတဲ့အခါ လာချင်လည်းလာမယ်၊ မလာချင်လည်းမလာဘူးလို့ ဖြေခဲ့ပါတယ်။ စထည့်ထည့်ချင်း ၆ လလောက်အထိတော့...
—–၊ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊—– Q. သမီးအိမ်ထောင်သည်ပါ။ ဘာတားဆေးမှ မသုံးပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လလောက်က . . . ကလေးလိုချင်လို့ အိုဂျီနဲ့ပြတာ အကုန်ကောင်းပါတယ်။ ဆရာဝန်ပေးတဲ့ သံဓာတ်အားဆေးကို တစ်နေ့တစ်လုံးသောက်ပါတယ်။...
ဗိုက်ခွဲကလေးမွေးပြီး အမြန်ဆုံးအနာကျက်စေမည့် နည်းလမ်း၁၀
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အမျိုးသမီး ၃ ဦးမှာ တစ်ဦးနှုန်းက ဗိုက်ခွဲပြီး ကလေးမွေးနေကြပါတယ်။ ဗိုက်ခွဲမွေးပြီးချိန်မှာ အနာကျက်စေမယ့် အလွယ်နည်းလမ်းတွေကို အကြံပြုပေးလိုက်ပါတယ်။ နည်းလမ်း (၁) အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားပါသည့် အချဉ်ဖောက်ထားသော အစာစားပါ ဗိုက်ခွဲမွေးဖွားချိန်အတွင်း အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားပါတဲ့ အစားအသောက်တွေစားထားရင်...
မိခင်ဖြစ်သူ၏ သားအိမ်ဖြင့် အာရှဒေသအတွင်း ပထမဦးဆုံး ကလေးမွေးနိုင်ခဲ့သူ
ကိုထက် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် မီးနာကရှိဝီလန်ဟာ အာရှဒေသရဲ့ ပထမဦးဆုံး အစားထိုးထားတဲ့ သားအိမ်နဲ့ အောင်မြင်စွာ ကလေးမွေးဖွားနိုင်ခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဝီလန်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၉ နှစ်ခန့်ကတည်းက အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပြီး ကလေးရဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သဘာဝနည်းနဲ့သာ...